"သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ဟုမေး & ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် စကားလုံး မဂ္ဂဇင်း။ 1906 နှင့် 1916 အကြားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းများကို၏စာဖတ်သူများကအန္တရာယ်ခဲ့ကြသည် စကားလုံး နှင့်အယူခံအောက်မှာမစ္စတာ Percival တို့က "မိတ်ဆွေတစ်ဦး။ " ဖြေကြားအချိန်ကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူကျနော်တို့အဖြေရေးသားသူအဖြစ်သူ၏နာမကိုနေရာချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာစစ်မှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်, မည်သည့်သတ်ပုံအမှားများကိုထိုကာလအတွင်းမှာရေပန်းစားပုဒ်ဖြတ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထိန်းသိမ်းထားပါပြီ။
1986 ခုနှစ်, နှုတ်ကပတ်တော် Foundation မှထုတ်ဝေနေဆဲကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုသုံးလပတ်ဗားရှင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒါဟာအစငါတို့စာဖတ်သူတွေကအန္တရာယ်မေးခွန်းများကိုပါဝငျသော "ခဏသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ" အပိုင်းပါရှိပါတယ်။
သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏ကိစ္စပေါ်မှာလူလုပ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတှေးအထိုကဲ့သို့သောခြင်္သေ့, ဝံ, ဒေါင်း, အမွီးကခလောကျသံပွုတတျသောမွှေဆိုးအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်မှသကဲ့သို့မည်သို့မည်ပုံပိုပြီးအပြည့်အဝမရှင်းပြနိုင်ပါသလား? (ဤမေးခွန်းတစ်ခုကို Percival ရဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကိုရည်ညွှန်း /Thought/.- Ed က။ )
ဒါကြောင့်စိတ်ကိုထဲကအတွေးထားရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ဒါကြောင့်လျှင်ဤကိုဘယ်လိုအမှုကိုပြုသဖြင့်, ဘယ်လောက်တဦးတည်းက၎င်း၏ထပ်မဖြစ်အောင် preent နှင့်စိတ်ထွက်စောင့်ရှောက်နိုင်သလဲ
အဆိုပါလျှို့ဝှက် Societies မှပိုင်ဆိုင်သည်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်စိတ်ထဲ retarding သို့မဟုတ်တိုးတက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား ဒါကြောင့်အချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလော
အဘယ်ကြောင့်လူတွေအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရရန်ကြိုးစားသလဲ? ဘယ်လိုအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ပေါ်လာသူတွေကိုသူတို့ get အရာကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်သလဲ?